မြေငန်နေရင် ဘယ်လိုပြုပြင်စိုက်ပျိုးမလဲ ?
↗️သီးနှံပင်များစိုက်ပျိုးရာတွင် ငန်နေတဲ့မြေငန်မှာဘယ်လိုပြုပြင်စိုက်ပျိုးရမလဲ ? ဘယ်အချက်တွေကိုဂရုပြုဆောင်ရွက်ရမလဲ ? ဆိုတာကို ယခုတစ်ပတ်ဆွေးနွေးအကြံပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၁) မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေမှာ ဒီရေလွှမ်းခံရတာကြောင့်ဖြစ်ခြင်း။
(၂) ဒီရေမလွှမ်းသော်လည်း ဒီရေဟာလယ်မြေတွေရဲ့အောက်မြေလွှာအထိစိမ့်ဝင်လာပြီး နေပူတဲ့အခါမှာ ရေနွေးငွေ့တွေဟာမြေမျက်နှာပြင်အပေါ်တက်လာပါတယ်။ ရေဟာအငွေ့ပျံသွားပြီးဆားတွေဟာ မြေကြီးမှာကပ်ကျန်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရခြင်း။
(၃) မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းတွေမှာ ဆပ်ပြာပေါက်မြေကြောင့် မြေငန်ဖြစ်ရခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
↗️ဆားငန်မြေ(ဒီရေလွှမ်းမြေ)မှာ စပါးစိုက်ရင် စပါးပင်ဟာရေငတ်တဲ့ဒဏ်ခံရသလိုညှိုးနွမ်းတယ်၊ စပါးပင်တွေအကွက်လိုက်သေကုန်တယ်၊ ပင်ပွားအထွက်နည်းတယ်၊ အပင်အရပ်မညီဘူး၊ ကြဲခင်း ဖြစ်ရင်တော့အပင်ပေါက်မစုံဘူး၊ မြေချဉ်ငန်ဓာတ်လွန်ကဲရင် ဆားငန်ဒဏ်ပိုခံရတယ်။ ထို့ကြောင့် ဆားငန်ဒဏ်ခံရတဲ့လယ်မြေတွေမှာ သဘာဝမြေဩဇာလုံးဝမထည့်ရပါဘူး။ နွေစပါးစိုက်လျှင် သက်တမ်းရက်(၉၀ မှ ၁၀၀) ရှိတဲ့မျိုးကို စိုက်ပျိုးရပါမယ်။
↗️စပါးအရွက် တစ်ရွက်နှစ်ရွက်ထွက်ချိန်မှာ ဆားငန်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်မရှိပါဘူး။ ပင်ပွားချိန်မှာနည်းနည်း ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်မျိုးစေ့ကို တိုက်ရိုက်မျိုးစေ့မချရပါ။ ကြဲခင်းမကြဲရပါ။ ပျိုးထောင်စိုက်မယ် ဆိုရင်ပျိုးသက်ရက်(၃၀)ထက်မငယ်သင့်ပါ။ ပျိုးပင်သန်စွမ်းဖွံ့ဖြိုးရပါမယ်။ အနှံထွက် ပန်းပွင့်ချိန်မှာ ဆားငန်ဒဏ်လုံးဝမခံနိုင်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့် အနှံထွက်ချိန်၊ ပန်းပွင့်ချိန်များမှာ စိုက်ခင်းအတွင်း ရေမနည်းစေရန် ဂရုစိုက်ရပါမည်။ ရေချိုကို(၅)လက်မခန့် အမြဲလှောင်ထားပါ။ မြေယာပြုပြင်ထွန်ယက် ချိန်တွင် ဆန်ကွဲ နှစ်တင်းမှ သုံးတင်းခန့် ကြဲပက်၍ ထွန်၊ထယ်နှင့် သမအောင်မွှေပေးပါ။ မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းဒေသများတွင် နွေစပါးကို တန်ဆောင်မုန်းလဆန်းတွင်အပြီးစိုက်ပါ။ မိုးစပါးမှာ ဆားငန်ဒဏ်ခံနိုင်တဲ့ မျိုးများကိုရွေးချယ်စိုက်ပါ။
↗️မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းဒေသများအတွက် လယ်မြေအငန်ဓာတ်လျော့သွားအောင် သဘာဝမြေဩဇာ များများထည့်ပေးပါ။ တစ်ဧကအတွက် ကျောက်မှုန့်မြေဩဇာ ပေါင်(၃၀၀)ခန့်သုံးပါ။ သွပ်ဓာတ် မြေဩဇာတစ်ဧက (၃)ပိဿာနှုန်း ထည့်ပါ။ ဆားဓာတ်ပါသောစက်ရေတွင်းရေကိုသွင်းရေအဖြစ် အသုံးမပြုရပါ။ ကြာလျှင်မြေပျက်သုန်းသွားနိုင်ပါသည်။ ဆားငန်ခံစပါးမျိုးများကိုစိုက်ပျိုးပါ။ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနကထုတ်ဝေထားသည့် ဆားငန်ခံ-၂၊ ၃၊ ၄ စပါးမျိုးများရွေးချယ်စိုက်ပျိုး ကြပါရန် အကြံပြုရေးသားအပ်ပါသည်။
Sources : Saya U Aung San